आइसियुमा जनशक्त्ति नहुँदा संक्रमितको ज्यान गयो – Health Post Nepal
आइसियुमा जनशक्त्ति नहुँदा संक्रमितको ज्यान गयो
२०७७ भदौ ९ गते १७:३४
प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले समयमै जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा आइसियु नपाएर एकजना संक्रमितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
भैरहवाको भिम अस्पतालमा आइसियू भएपनि जनशक्ति नहुँदा एकजना बिरामीलाई भर्ना गर्न ढिला गरेको थियो।
रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका वडा नं. ३ का ५० वर्षीय कल्लु नाउको मृत्यु भएको हो। सोमबार साँझ ५ बजेतिर कोभिडको उपचारका लागि भीम अस्पताल पुर्याएपनि ३ घण्टासम्म अस्पतालले भर्ना नलिएको उनका आफन्तले आरोप लगाएका छन्।
घर बनाउन मिस्त्रीको काम गर्ने नाउ छतबाट लडेर टाउकोमा चोट लागेका उनको उपचारका लागि भैरहवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा गएका थिए।
उनको उपचारका लागि कोरोना जाँच गर्दा भदौ ५ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। कोरोना पोजेटिभ आएपछि मेडिकल कलेजले उनलाई कोभिड उपचारका लागि भीम अस्पताल पठाएको थियो।
मेडिकल कलेजबाट भिम अस्पतालमा कोभिडको उपचारका लागि पुगेका उनलाई डाक्टर नभएको भन्दै लामो समयसम्म अस्पतालले भर्ना नलिदा समयमा उपचार पाएनन्।
आईसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना नलिएपछि उनको अबस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको र राती मृत्यु भएको उनका भाई हसन मोहम्मद नाउले गुनासो गरे।
भीम अस्पताल कोभिड १९ का फोकल पर्सन डा. सुमित प्रजापतिले जनशक्ति अभावका कारणसहि उपचार हुन सक्दा बिरामीको मृत्यु भएको स्विकार गरे। उनले अस्पतालमा ५ बटा आईसियु वेड सहितको सुबिधा भएपनि आइसियु संचालनका लागि जनशक्ति नभएका कारण उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्न नसकिएको बताए।
प्रदेश सिसिएसीको निर्णय विपरीत मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनमा पत्राचारका कारण भीम अस्पतालले कोभिड १९ को जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले साउन २२ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड १९ को थप जोखिमलाई विश्लेषण गरी हाल कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएको जनशक्तिलाई थप तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भाद्रको २ गते पहिले काम गरिरहेका जनशक्तिमध्ये कम संख्या तोकेर काममा लगाउन निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो। अस्पतालका अनुसार मन्त्रालयको पत्रमा १ जना मेडिकल अधिकृत, ४ जना स्टाफ नर्स र ४ जना सरसफाइ कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन भनेको छ। यस अघि २ जना मेडिकल अधिकृत, ७ जना स्टाफ नर्स र ५ जना सरसफाइ कर्मचारी थिए।
कसलाई बोलाउने र कसलाई नबोलाउने भन्ने अन्यौलपछि काममा बोलाउनमा ढिलाइ भएको अस्पतालको भनाई छ। उक्त घटनापछि भीम अस्पताल प्रशासनले मंगलबार मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार कोभिड १९ मा काम गरिरहेका करारका केही कर्मचारीलाई मात्रै काममा बोलाउने निर्णय गरेको छ।